माग पूरा भए काठमाडौं फर्किन्छु, नभए यतै मृ'त्यु पनि हुन सक्छ : डा. गोविन्द केसी - Himali Patrika
माग पूरा भए काठमाडौं फर्किन्छु, नभए यतै मृ’त्यु पनि हुन सक्छ : डा. गोविन्द केसी
हिमाली पत्रिका १७ भाद्र २०७७, 9:36 am
१७ भदौ, काठमाडौं । हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश लिँदा कुममा सानो झोला भिरेर बाहिरिएका थिए । क्वार्टरमा बिलासिताका सामग्री थिएनन् । केही थान कपडा, खुइलिएको ओच्छ्यान र बन्दोबस्तीका व्यक्तिगत समानहरु बोक्नका लागि अस्पताल अगाडि भाडाको भ्यान हाजिर थियो ।
सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरे कर्णालीमै सत्याग्रह बस्ने निर्णयमा पुगेका छन् डा. केसी । उनी आफंैलाई थाहा छैन– सत्याग्रहपछि उनका माग हुन्छन्÷हुँदैनन् ।
डा. केसी १८ कात्तिक, २०७६ मा बस चढेर काठमाडौंबाट सुदुरपश्चिमतिर उक्लिए ।
सुदुरपश्चिपछि डा. केसीका पैताला कर्णालीतर्फ सोझिए । एक फिरन्ते जसरी । एक साधु जसरी । एक विशेषज्ञ, अनुसन्धाकर्ता जसरी । एक सुधारक र समाजका उत्प्रेरक जसरी । अनेक रुपमा एक्लै–एक्लै, लखरखर गाउँ हिँडिरहे उनी ।
‘मैले उपचार मात्र गरिनँ, जहाँ पुगें, कोरोनाबाट बच्नका लागि सावधानीका उपायहरुबारे सचेत गराएँ,’ डा. केसी अनलाइनखबरसँग भन्छन्, कोरोनाबाट त्रसित होइन, सचेत रहन आग्रह गरेँ ।’
‘म आ’तंक’कारी होइन’
१० भदौदेखि डा. केसीको पूर्वनिर्धारित सत्याग्रहको कार्यक्रम थियो । तर, उनी बसेको जुम्लाको रोयल होटेलमा बिहानैदेखि प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति देखियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकसँगको वार्तापछि उनले सत्याग्रहलाई एक हप्ता पछाडि धकेले ।
सत्याग्रहका उनका माग यस्ता छन् –
उत्साह बोकेर स्वास्थ्यचौकी पुगेका डा. केसी घोसेमुन्टो लगाएर लुखुर–लुखर सदरमुकाम फर्किए । ‘लुटतन्त्र चलाउने सरकारले मलाई बाधाको रुपमा हेरिरहेको छ, दरिद्र मानसिकताले मेरो काममा दख्खल दिइरहेको छ’, केसीले अनलाइनखबरसँग भने ।
डा. केसीका लागि ग्रामीण अनुभव नौलो होइन । धेरैवटा जिल्लामा पुगेर उनले बिरामी सेवा गरेका छन् । यसपटक सुदरपश्चिम र कर्णाली यात्रामा उनले कोभिडभन्दा अरु रोगबाट मानिसहरुले दुःख पाइरहेको अनुभूति गरे ।
‘माग पूरा भए काठमाडौं फर्किन्छु, नभए यतै मृ’त्यु हुन सक्छ’
‘स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि यहीँ सत्याग्रह बस्छु । अरुको अधिकार हनन नगरी सत्याग्रह बस्न पाउने मेरो अधिकार हो’, डा. केसी भन्छन्, ‘माग पूरा भए काठमाडौं फर्किन्छु, नभए सत्याग्रहका बेला यतै मृत्यु पनि हुन सक्छ ।’